ရန်ုကုန်က ဘားကမ်င့် … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » ရန်ုကုန်က ဘားကမ်င့် …
ရန်ုကုန်က ဘားကမ်င့် …
Posted by kai on Feb 4, 2010 in Education, News, Society & Lifestyle | 1 comment
ရန်ကုန်မှာ ဘားကမ့် လုပ်မယ်ဆိုလို့ သတိထားကြည့်နေတာ အခုတော့ အလင်းတန်းဂျာနယ်မှာလည်းသတင်းဖတ်လိုက်ရတာမို့ အဲဒီသတင်းကို ဖြတ်ညပ်ပြီး တင်လိုက်ပါတယ်။
(ကို)ညီလင်းဆက် ၀က်ဘ်ဆိုက်မှာလည်း (ဇန်န၀ါရီ ၂၃ )နေ့စွဲနဲ့ ဘားကမ့်ပထမနေ့က စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ တော့ပစ်တွေစီတာတွေ့ရတာမို့ မြန်မာပြည်က အိုင်တီသမားတွေ ဘာကို စိတ်ဝင်စားကြသလည်း မှန်းကြည့်လို့ ရအောင် ကူးတင်ထားလိုက်ပါတယ်။ နောင်အမေရိက လာကြရင် ခရက်ဒစ်ယူလို့ရအောင်လည်း အမည်မှတ်တန်းကျန်အောင်ထားတယ်ဆိုပါတော့..။
အလင်းတန်း သတင်းဆောင်းပါးမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားမြို့ လို့ ရေးထားတာတခုကိုပဲ တမျိုးဖြစ်သွားမိတာပါ၊ ပဲလ်လိုအလ်တို မြို့ အမည်ကို လွတ်သွားတယ် ထင်ပါရဲ့။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာလူငယ်၊ လူရွယ်တွေ ကြိုးစားတာအောင်မြင်တာကို အသိအမှတ်ပြုမိပါတယ်။ ပွဲ၂ရက်စုစုပေါင်း လူ၂၅၀၀ ကျော်လာကြတယ်ဆိုတော့လေ။
မှတ်ချက်။ ။ (ကို)ညီလင်းဆက် နဲ့ရော အလင်းတန်းနဲ့ပါ အဆက်အသွယ်လုံးဝမရှိပါ။ တော်ကြာ အဆက်အသွယ်ရှိသလား သွားမေးနေခံရမှာစိုးလို့ ပါ…(ကြောက်ရတယ်…ဆရာတွေက…)
Barcamp Yangon 2010’s First Day Discussion Topics and Presenters
Django “A Python web frame work for perfectionist with deadlines” by John Berns
First of all I’d like to say, this isareally informative post! I’ve gotalittle question bothering me, I really love the theme of your blog and tried to download the same layout on my WP site. Stil, there is some kind of weird coding error in the sidebar. Do you have any tips, what version are you using? Please PM me on Twitter @FitnessGuru or via e-mail.